Saraakiisha ciidamada dowlada ee gobolka Bay ayaa shaaca ka qaaday iney Al-shabaab kala wareegeen degaano cusub oo ka tirsan gobolka Bay.
Taliyaha guutada 60-aad ee ciidanka Xoogga Jen. Ibraahin Yarrow ayaa sheegay in deegaanada ay ka qabsadeen xoogaga Al-shabaab ay ka mid yihiin Dambal, Aw-diinle, Toos-weyne iyo Saydheelow.
“Ma jirin iska caabin xoogan oo ayla kulmeen ciidamadeena, meelaha qaarna kooxaha nabadiidku way isaga carareen markii ay ka war heleen in ciidanka xooga dalku uu ku sii jeedo” ayuu intaa ku daray Jen. Ibraahin Yarrow.
Taliyaha ayaa sheegay ayaa sheegay in ciidamadu ay sii wadi doonaan howlgallada inta ay xoogaga Al-Shabaab ay ka saarayaan dhammaan degaannada ka tirsan gobollada Bay iyo Bakool ee ay ku sugan yihiin.
Guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caracase ayaa isna sheegay in howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen duleedka degmadaas ay Al-shabaab kaga qabsadeen tuulo lagu magacaabo Howlaha Guud, iyadoo Al-shabaab aysan illaa hadda ka hadlin degaanada lagala wareegay.